MARVEL Battle Lines 2.4.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.4.1 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Google Play ရဲ့ပွဲလမ်းသဘင် updates များကိုအတူအားလပ်ရက်များအတွက်အဆင်သင့်ရယူပါ!
-Holiday BGM လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။
ယခုရရှိနိုင် -Special အားလပ်ရက်ထုတ်ကုန်။
အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကို Portal ကိုရရှိနိုင်ယခု -Special အားလပ်ရက်ဖြစ်ရပ်များ။
အဆိုပါနတ်မင်းကြီး Cube အတွက်အံ့ဩခြင်းဠာထဲမှာအသစ်စက်စက်ကဒ်ဂိမ်းထဲမှာချိုးဖဲ့ပြီးပါပြီ! Marvel တိုက်ပွဲလိုင်းများအတွက်ပရမ်းပတာသို့ထိုး။ စူပါသူရဲကောင်းများနှင့် villain သေစားသေစေသော, က Galaxy ၏ Guardians, Spider-Man နှင့်ပိုပြီးအပါအဝင်ဤ action ကဒ်ဂိမ်းအတွက်စည်းလုံးညီညွတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ , ဒဏ္ဍာရီသူရဲကောင်း join အဆိုပါ shards စုဆောင်းဝဠာ restore!
Captain America, Thor, Daredevil, Venom, ဆရာဝန်ထူးဆန်းပင် Thanos အပါအဝင်သင်အကြိုက်ဆုံးအံ့ဩခြင်းအက္ခရာကျော် 100, ၏စစ်တိုက်ကတ်များစုဆောင်းပါ။ ကုန်းပတ်အဆောက်အဦ Start နဲ့ Single-player ကို mode မှာအရေးယူသို့ဇာတ်ကောင်ပေးပို့သို့မဟုတ်သွေးခုန်နှုန်း-pounding PvP ပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့ကစားသမားနှင့်အတူဦးခေါင်း-to-ခေါင်းကိုသွားပါ။
, သင့်မဟာဗျူဟာ Set သင့်ရဲ့ကုန်းပတ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဂိမ်းစုဆောင်းဒီဒဏ္ဍာရီကဒ်အတွက်အံ့ဩခြင်းစကွဝဠာကိုကယ်တင်! ယနေ့ Download!
Marvel တိုက်ပွဲ Lines အင်္ဂါရပ်များ:
• Marvel ကနေစည်းလုံးစေစူပါသူရဲကောင်းများ
အံ့ဩခြင်းရုပ်ပြသူရဲကောင်းများ & villain
•အပါအဝင် 100 ကျော်စူပါသူရဲကောင်းနှင့်စူပါဗီလိန်ကတ်များစုဆောင်း:
•က Black မုဆိုးမ
•က Black Panther
•သင့်သြဇာအရှိဆုံးအဖွဲ့ကိုဖန်တီးရန်ကဒ်ကုန်းပတ် Build ။
•စူပါသူရဲကောင်းများနှင့် Avengers ကနေစူပါဗီလိန်, က Galaxy ၏ Guardians, အကာကွယ်, S.H.I.E.L.D နှင့်ပိုပြီးပေါင်းစပ်!
•သင့်မဟာဗျူဟာ Set: သုံးကတ်များကိုဖမ်းပြီးနှင့်သင့်ပြိုင်ဘက်တိုက်ခိုက်ရန်။
•တိုက်ပွဲကတ်များတစ်ခုတည်းကစားသမား mode မှာ
• PvP ပြိုင်ဆိုင်မှုအလွန်ရှေ့ဦးစွာ မှစ. ရရှိနိုင်ပါသည်။
ကဒ်စုဆောင်းခြင်း, ကုန်းပတ်အဆောက်အဦများနှင့် Marvell တိုက်ပွဲလိုင်းများနှင့်အတူဝဠာချွေစတင်ပါ။ ယခု Download!
နောက်ဆုံးပေါ် Marvell တိုက်ပွဲလိုင်းသတင်းနှင့်မွမ်းမံမှုများအဘို့အ Facebook ကို https:www.facebook.compgMVLBattleLines နှင့် Twitter https:twitter.comMVLBattleLines အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ!
ပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေပါသလား? https:i.nx.com2Qj သွားရောက်ကြည့်ရှုသို့မဟုတ်
အံ့ဩခြင်းတိုက်ပွဲလိုင်းသည်အနည်းဆုံး OS ကို 4.4 Samsung ရဲ့ Galaxy S6 သို့မဟုတ်ချောမွေ့ဂိမ်းများအတွက်ပိုကောင်းလိုအပ်သည်။ အဆိုပါဂိမ်းသည်ဤလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းမကိရိယာများပေါ်တွင် crash လိမ့်မည်။
"ဓါတ်ပုံများ မီဒီယာ ဖိုင်များ" CS ဘို့အတွက်ဂိမ်း screenshots များပူးတွဲဖွင့်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
msi8 စတိုး 98.98k 29.93M
APK ဗားရွင္း 2.4.1
လက်မှတ် SHA1: A6:46:87:0B:BF:FD:C1:85:26:F5:18:A9:46:30:1F:65:4D:8D:BA:E7
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Android Republic
အဖွဲ့အစည်း (O): Sager Technologies
နယ်မြေ (L): Cyberjaya
နိုင်ငံ (C): MY
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Selangor Darul Ehsan